मनोरन्जन Archives - Ebihani.com
6 days ago	मनोरन्जन 0
” आमा आज दशैं हैन र ?” मासु खाने हैन र आज ? थालमा पस्केको पहेंलो मकैको भात र तेस्मा सागको दुई-तिनवटा त्यान्द्रा हेर्दै मैले‌ भने‌ । आमा अर्को थालमा भात पस्किदै भन्नु भो : “आज नवमी हो नि ! मासु त दशमिमा पो खान्छन त ! भोलि खाने हो …
परिवारलाई झस्काइरहन्छ,दुई दिनअघि बनाएकाे टिकटकले जब हाँस्दै कुरा गरिरहेकी छोरी चि’च्याएको आवाज आमाले सुनिन्!
7 days ago	मनोरन्जन 0
August 30, 2021	मनोरन्जन 0
एजेन्सी, रियालिटी टिभी स्टार तथा विश्वको कान्छी अरबपति सेलिब्रिटी काइली जेनरको घर फेरि खुसी हुन लागेको छ। वास्तवमा काइली फेरि आमा बन्दै छिन्।२४ वर्षीया काइली आफ्नो प्रेमी ट्रेविस स्कटको साथमा आफ्नो दोस्रो सन्तानको प्रतीक्षामा छिन्। हामी बताउछौ कि ट्रेविस र काइलीको पहिले नै तीन बर्षकी छोरी छ। त्यस्तै, अब काइलीले …
August 20, 2021	मनोरन्जन 0
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानको नाक काटिएको छ । उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्, जसमा उनको नाक काटिएको देख्न सकिन्छ । नाकमा उनले कटन राखेकी छिन् । भिडियोमा साराले आफ्नो आमा बुवा अमृता सिंह, सैफ अली खान र भाइ इब्राहिमसँग माफी समेत मागेकी छिन् …
May 29, 2021	मनोरन्जन 0
दाहाल – रिपोर्टिङको सिलसिलामा छोटो यात्रामा थियाैं । साथमा थिए एक पुरुष पत्रकार अनि पाँच जना अधिकारकर्मी । गाडीमा थियौं । बिहेको सिजन बाटोमा एक विहेको जन्ती भेटिए । त्यसपछि स्वभाविक विहेको कुरा निस्किने नै भयो । टीममा अविवाहित पत्रकार साथी मात्रै थिए । भनें,ल है यो महिना पनि जन्ती …
March 12, 2021	मनोरन्जन 0
म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर …
February 15, 2021	मनोरन्जन 0
सन् २०१४ मा नायिका करिश्मा मानन्धरलाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले हङकङमा आयोजना भएको ‘नेफ्टा फिल्म अवार्ड’मा ‘सदाबहार नायिका’को उपाधि दियो । करिश्मालाई ‘सदाबहार नायिका’को उपाधि दिनु भन्दा केही बर्ष अगाडि प्राविधिक संघले नै नायक राजेश हमाललाई ‘महानायक’को उपाधि दिएको थियो । उसो त, करिश्मालाई नेफ्टाले ‘सदाबहार नायिका’को उपाधि नदिदा पनि …
February 6, 2021	मनोरन्जन 0
धनगढीः कैलालीमा ठुलो दु’र्घटनाबाट जोगिएको ट्रकका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।भीमदत्त राजमार्ग अन्तरगत जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाको निङ्लाडीस्थित राजमार्गमा बिहीबार राति नियन्त्रण गुमाएर सडकबाट बाहिर गएको ना७ख १८८४ नम्बरको ट्रकका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट खानीडाँडाका प्रहरी हवलदार मोहनदेव भट्टले बिहीबार राति दु’र्घटनाबाट जोगिएको ट्रकलाई …
February 4, 2021	मनोरन्जन 0
पूर्व राजकुमार र राजकुमारीकी कान्छी छोरी कृतिका शाहको जन्म अक्टोबर १६, २००३ मा नारायणहिटी दरबारमा भएको थियो । रुपिस इन्टरनेश्नल स्कुलमा पढेकी कृतिका अहिले उच्च शिक्षाको लागि थाइल्यान्डमा छिन् । १७ वर्ष पुगेकी चन्चल स्वभावकी कृतिका पछिल्लो समय टिकटक भिडियो बनाउन व्यस्त छिन् । पूर्णिका शाह र कृतिका शाह आफ्नी …